Edhisheni timu | Absolut Kufamba
Absolut Viajes ndeye Webhusaiti yeBhuku reActualidad. Yedu webhusaiti yakatsaurirwa ku nyika yekufamba uye mariri tinokurudzira nzvimbo dzekutanga apo isu tinoda kupa ruzivo rwese nezano pamusoro pekufamba, tsika dzakasiyana dzenyika uye zvakanakisa zvinopihwa uye magadhi evashanyi.
Dare rekunyora reAbsolut Viajes rinoumbwa ne vanofarira vanofamba uye globetrotters emarudzi ese vanofara kugovana ruzivo rwavo uye ruzivo newe. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chayo, usazeze kuita tinyore isu kuburikidza neichi fomu.
Sezvo ndaive mudiki ndaive pachena kuti chinhu changu kwaive kuve mudzidzisi. Mitauro yagara iri simba rangu, nekuti imwe yeakakura maroto ave uye ari, kutenderera pasirese. Nekuti nekuda kwekuziva kwakasiyana zvikamu zvepasi, isu tinokwanisa kudzidza zvakawanda nezvetsika, vanhu uye pachedu. Kuisa mari mukufamba kuri kushandisa nguva yedu!
Ndine makore anopfuura makumi maviri ezviitiko zvehunyanzvi munyika yezvekushanya, iwo mamwechetewo andanga ndichiverenga mabhuku uye ndichishanyira nzvimbo dzinoshamisa pasirese.